Xukuumada Somaliland ee madaxweyne Daahir Riyaale kaahin, waxay ahayd mid ku timi xukunka doorashadii May, 2003, waqtigaa oo uu tiro codad aad u yar oo mad madaw badani ka muuqday ku guulaysatay shan sannadood hogaaminta talada dalka, isagoo mudadaa wixii ka horeeyay
Mr. Riyaale ku xigeen u ahaa laga soo bilaabo 1997, Madaxweynihii geeriyooday Marxuum Cigaal oo uu geeridiisa ka dibna xukunka sii hayay ilaa la gaadhay doorashadii madaxtooyada ee uu tirada yar ku helay.
Mr . riyaale muu ahayn nin bulshadu aqoon u leedahay ama, inta badan muuqaalkiisa arkeen, taas oo ay ugu wacnayd iyadoo aan xataa mudadaa uu madaxweyne xigeenka ahaa inta badan lagu arag magiisa iyo muuqiisa toona saaxada warbaahinta iyo fagaarayaasha siyaasada oo magaciisa iyo muuqiisuba aad ugu yaraayeen.
Laakiin sida ay dadka siyaasada odorosa, ama axadhaa ku tilmaamaan, Mr. riyaale maadaama uu ahaa sarkaal ka tirsanaa ciidamadii nabadsugida NSS-ta ee dadka rayidka ah tacadiyada iyo dhibaatooyinka u geysan jiray oo meelaha qaar looga yaqaanay cutubyada Eyda cagaaran,( Green Dogs Battalions), wuxuu isagoo ka faadidaysanaya fursadaa intii uu ahaa ku xigeenka muuqaalkiisa iyo magaciisaba ka dhawray in lagu arko, ama lagu maqlo saaxada siyaasda iyo fagaarayaasha laysku arko.
Mr. Rayaale markii uu isku hubsaday kursiga, wuxuu durbadiiba daaqada ka saaray balan qaadyadii uu xiligii kaanbeynka shacbiga hortiisa kaga balan qaaday, kuwaas oo ay ka mid ahaayeen inuu wax ka qabanayo musuq-maasuqa iyo caddaalad darada, oo ahaa labada qodob ee ugu waaweyn mushkiladaha badan iyo duruufaha ku xeeran bulashada Somaliland, marka laga reebo halganka ay ugu jiraan sidii ay beesha caalamka uga heli lahaayeen aqoonsi buuxa. Somaliland xiligaa waxay ahayd meel ku jihaysan qorshaha nidaamka geedi socodka dumuqraadiyada iyo doorashooyinka xorta ah, taas kahasab ku noqotay inay indhaha beesha caalamka iyo rayalcaamka bulshada aduunku soo jaleecaan.
Inkasta oo Madaxweyne Rayaale ku yimi doorasho, iyadoo aanay bulshadu aqoon fiican u lahayn markii uu si dhaxal ah xukunka ula wareegay wixii ka danbeeyay geeridii madaxweyne Cigaal ilaa waqtigan aynu ku jirno talaabooyinka siyaasadeed ee uu qaaday iyo waxyaabaha ka dhacay dalka mudadaa uu xilka hayay waxay noqdeen kuwo muuqaalladooda lagu fasiri karo sida muqaalka siyaasadda kooxda Al-shabbaab ee koonfurta Soomaaliya.
Sidaa awgeed dhacdooyinka iyo qorshayaasha siyaasadeed ee bedelay muuqaalka siyaasada, xaalada amniga iyo dhaqankii siyaasadeed ee lagu bartay Somaliland mudadii ay jirtay ayaa si weyn wax isaga bedeleen intii i uu xilka hayay Madaxweyne Rayaale. Laakiin inta aynaan u gelin arrimaha iftiiminaya….. La soco……